Olee otú Naghachi Data si oké mkpa USB Flash Drive
> Resource> Flash Drive> Olee naghachi Data si oké mkpa USB Flash Drive
Ẹkeme naghachi faịlụ site oké mkpa USB Flash Drive?
My 16GB oké mkpa USB flash mbanye bụ o doro anya na-emerụ n'ihi na ọ Windows kọmputa ma ọ bụ Mac ike efego ya. M nwere ike na-ahụ naanị flash mbanye na disk management ma m nwere ike imeghe ya. Bụ n'ebe ọ bụla software na pụrụ inyere m aka ga-esi m faịlụ azụ rụrụ arụ oké mkpa flash mbanye? Nwere ike onye na-enyere m biko? Daalụ n'ọdịnihu.
Data na gị oké mkpa USB flash mbanye nwere ike furu efu ruru ka usoro njehie, gị na mberede / kpachaara anya nhichapụ, mbanye formatting ma ọ bụ nje ọrịa. Dabara nke ọma, dị ka ogologo oge furu efu data bụghị e overwritten site ọhụrụ data na gị mbanye, gị nwere ike omume weghachite ya na a oké mkpa USB flash mbanye data mgbake usoro.
Ebe a bụ m ndụmọdụ: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, a dị ike mmekọ na-naputa niile furu efu, ehichapụ, Ị na rụrụ arụ faịlụ site na gị oké mkpa USB flash mbanye. Ọ na-akwado mgbake nke a nnukwu ego nke faịlụ na ụdị, dị ka photos, videos, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery omume na-iṅomi gị oké mkpa USB flash mbanye ugbu a!
Naghachi Data si oké mkpa USB Flash mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Naghachi data si oké mkpa USB flash mbanye, M ukwuu atụ aro ka ị na-adịghị eji gị mbanye mgbe data furu efu.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite oké mkpa USB flash mbanye data mgbake
Dị ka oyiyi n'okpuru na-egosi, ị ga-esi 3 mgbake ụdịdị na a "Wubàtá Iweghachite" nhọrọ mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị.
"Echefuola File Iweghachite" mode nwere ike ịbụ gị akpa oke iji weghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị oké mkpa USB flash mbanye.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị oké mkpa USB flash mbanye
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara mbanye akwụkwọ ozi maka gị oké mkpa USB flash mbanye na pịa "Malite" ke window na-amalite ịgụ isiokwu furu efu faịlụ na ya.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị oké mkpa USB flash mbanye nwere ike-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na oké mkpa USB flash mbanye
Mgbe scanning, hụrụ faịlụ gị oké mkpa USB flash mbanye ga-egosipụta na mmemme window. Ị nwere ike ịlele hụrụ faịlụ aha ma ọ bụ preview hụrụ oyiyi elele ma nke furu efu faịlụ nwere ike weghachiri eweghachi si gị oké mkpa USB flash mbanye.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara faịlụ na ị chọrọ iji weghachite si oké mkpa USB flash mbanye na pịa "Naghachi" button ke window na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Olee otú Naghachi Data si exFAT Drive
iWork File Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ iWork Files
Buffalo mpụga ike mbanye Data Recovery Guide
Ibu karịa ibu - Gịnị size maka a USB flash mbanye eme gị mkpa
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site USB Drive
Olee otú naghachi faịlụ site Kingston USB Drive
Best ụzọ Ọkpụkpọ na unformat gị flash mbanye
Olee otú ịzọpụta gị Dị Oké Mkpa faịlụ site na a rụrụ arụ Flash Drive
All mkpa ka ị mara banyere dị iche iche nke USB Flash Drive
Kingston Flash Drive Iweghachite: Naghachi Data si Kingston Flash mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Adata Flash Drive Iweghachite: Olee naghachi Data si Adata Flash Drive